Siri Laankaatti haleellaa boombiin namootni 290 ajjeefaman - BBC News Afaan Oromoo
Siri Laankaatti haleellaa boombiin namootni 290 ajjeefaman
22 Ebla 2019
Dhohinsi boombii kun waldaalee kiristaanaa sadii fi hoteelota irratti kan xiyyeeffate
Sirilaankaatti dhohinsa boombii saddet waldaa kiristaanaa fi hoteelota gurguddoo irratti dhaqqabeen yoo xiqqaate namootni 290 ajjeefamuun namootni 500 ol madaa'aniiru.
Dhohinsi boombii kun waldaalee kiristaanaa sadii Negomboo, Batikalo fi Kolombo bakkeewwan jedhamitti dhaqqaban.
Hoteelotni gurguddoon akka Shangari La Kingisbarii, Sinamoon Girandi hoteelii fi hoteelli gara biraan tokkos haleelamaniiru.
Haleellicha qaamni dhaqqabsiise hanga ammaatti baramuubaatus namootni 24 to'annoo jala ooluu isaanii poolisiin beeksiseera.
Feesbuukiin tamsaasa kallattii irratti daangaa tolchuuf
Namoonni Haleellaa Naayiroobiin shakkaman 9 qabaman
Hanga haalicha irratti hubannon kennamutti sochiin akka biyyaalessatti dhorkameera.
Akkasumas miidiyaaleen hawwaasaas yeroodhaaf ugguramaniiru.
Ministirri dhimma alaa akka beeksisetti yoo xiqqaate lammiileen biyya biraa 27 kanneen ajjeefaman jkeessatti argamu.
Ministirri muummee Siri Laankaa akka jedhanitti haleellicha waliin wal qabatee namootni saddet to'atamaniiru. Haa tahu malee haleellicha dudduuba kan jiru eenyu akka tahe wanti barame hin jiru.
Ministirri Muummee biyyattii Ranil Wikreemesinge qaamni nageenyaa haala haleellicaa irratti odeeffannoo qaba ture jedhanii garuu yeroodhaan irratti hin hojjenne jechuun ibsan.
Masiriitti halleellaa masijiida irratti raawwatameen namoonni 300 ajjeefaman
Haleellaa gaazexeessitootarratti xiyyeeffateen namoonni shan du'an
Haleellichi akkamiin dhaqqabe
Dhohinsi boombii jaha aluma takkaa hoteelotaa fi waldaalee kiristaanaa irratti raawwachuun kaleessa ganama ture kan gabaafame.
Waldaan Qulqulluu Seebaastiyaan magaalaa Negombo akka malee kanneen miidhaman keessaa yoo tahu namootni hedduunis achitti du'aniiru.
Akkasumas waldaa Qulqulluu Antoniyaa jedhamu kutaa Kolombo keesatti argamu irratti dhohinsa dhaqqabeenis akkasuma miidhaa guddaan dhaqqabeera.
Roobert Teeyiler waggoota jahaaf Siri Laamkaa kan jiraate BBCtti akka himetti hoteelotni lama yeroo namootni hedduun ciree nyaachuuf baay'atanitti mana nyaataa isaanii irratti xiyyeeffachuun haleellamuu hin hafne jedhe.
Dhohinsi torbaffaan Kibba Kolombotti kan dhaqqabe yoo tahu sadeffaan ammo naannoo paarkii Dehiwala jedhamu cinuma Kolomootti dhaqqabe.
Miidiyaaleen akka gabaasanitti balicha kan dhaqqabsiisan namoota badanii balleessan yoo tahu namootni sadii yeroo sakkata'insaa ajjeefaman qama nageenyaa tahuu hin hafan jedhama.
Haleellaa mana amantaa Qulqulluu Sebastiyaan barbadeesse
Kaleessa sa'a booda ammoo naannoo buufata xiyyaaraa Siri Laankaatti meeshaaleen dhohan gurguddoon gara biraan dhabamsiifamuu beeksiseera.
Qondaaltotni biyyattii akka jedhanitti namootni waraqaa raga darbuu qopheeffatanii fi waraqaa eenyumeessaa qaban sakata'amuun dhorka imalaa labsame kana keessa gara buufata xiyyaaraa deemuu akka danda'an himaniiru.
Haa tahu malee imaltootni sa'aa balalii isaanii sa'a afur durssuun achi gahuu akka qaban himaniiru.
Lubni mana amantaa Qulqulluu Antooniyoo eenyu haleellicha dhaqqabsiise ammaaf ibsuun ulfaatus lubootni hundinuu achi turan gadda keessa jiraachuu ibsuun haleellaa itti yaadame qindaa'e jechuun balaaleffataniiru.
Erga bara 2009 gareen Taayiger jedhaman injifamaniin as Siri Laankaatti haleellaan akkanaa dhaqqabee hin beeku
Miidhamtootni eenyu fa'i?
Irra caalaan namoota ajjeefamanii lammiilee Siri Laankaa yoo tahan kanneen sagantaa ayyaana faasikaa hordofaa turan tahuu gabaafameera.
Yoo xiqqaate lammiilee Ingiliz shan kanneen keessaa lamummaa Ameerikaas kanneen qaban lama keessatti argamu.
Mootummaan Ameerikaa akka ibsetti ammoo lammiileensaanii hedduun kanneen ajjeefaman keessatti argamu.
Lammiileen Denmaarki sadii fi Turkii lamas akkasuma ajjeefamuu isaanii ibsameera.
Akkasuma lammiileen Nezelaandis,Hindii fi Poortugaalis kanneen ajjeefaman keessatti argamu.
Lammiileen Siri Laankaa namoota madaa'anii dhiiga barbaadaniif amanataa fi gosaan osoo wal hin qoodiin dhiiga gumaachaa akka jiranis gabaafameera.
Hawwaasni idila adunyaa maal jedhe?
Pirezidaantiin Siri Laankaa Maatiripaalaa Siriseenaa uummatni hundinuu tasgabbaa'uu akka qaban dhaamuun qama mootummaa haleellicha qoratu deeggaruu akka qaban dhaamaniiru.
Ministirri Muummee biyyattii Ranil Wiikriimesingee haleellicha balaaleffachuun haleellaa ''hiika hin qabne''jedhan.
Yeroo hamaa akkasii kana keessatti lammiileen Siri Laankaa tokkummaa'uu fi cimuu akka qabanis dhaamaniiru.
Poopi Fraansis Vaatikaanitti yeroo ayyaana faasikaa irra turan haleellaa jibbisiisaa akkasii kiristaanota ayyaana faasigaa ayyaaneffatan irratti dhaqqabe jechuun balaaleffataniiru.
Barreessaa Olaanaan Dhaabbata Mootummota Gamtoomanii Antooniyoo Guutires haleelichi akka malee ''na rifachiiseera'' jedhanii namootni kana raawwatan seeratti dhiyaachuu akka qaban abdii qabanis himaniiru.
Phaaphaasiin Kolomboo gochaa gaddisiisaadha jedhanii guyyaa ayyaana faasikaa irratti waan akkasii ni raawwata jennee tasuma hin eegne jedhan.
Ministirri Muummee UK Teresa Meey haleellaan waldaalee Kiristaanaa fi hoteelota Siri Laankaa irratti dhaqqabe gochaa suukaneessaadha jechuun karaa tiwwiterii isaanii barreessan
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampis gadda isaanii ibsaniru.
Haleellaan akka kanaa erga waraana walii waliinii biyyattii keessa turee bara 2009 as dhaqqabee hin beeku.
Waraanichi gosa Tamil Tigers jedhaman foxxoquuf waggoota 26'f waraanaa turanii fi saba kaan gidduutti kan gaggeeffamaa ture yoo tahu waraanicha irratti injifamaniiru.
Waraanicha irrattis lubbuun namoota 70,000 hanga 80,000 darbeera jedhama.
Bara 2018 keessa yeroo hordoftootni amantaa Budizimii Sinhala jedhaman masjiidotaa fi qabeenya Musiliimotaa irra miidhaa dhaqqabsiisan mootummaan labsii yeroo muddamaa labsee ture.
Hordoftootni amantaa Budizimii Teravaadaa lakkoofsaan heddumina qabu.Kunis 70% kan tahu yoo tahu amantaa saba Sinhaleesee jedhamaniiti. Heera biyyattii keessatti dursi kan kennamuuf yoo tahu kaan irraa addattis ibsameera.
Hinduun [ 12.5%] Musiliimonii ammoo 9.7% tahu. Akkasumas akka raga lakkoosa uummataa bara 2012tti Kiristaanotni miilyoona 1.5 tahan Siri Laankaa keessa jiru.
Waldaa Kaatolikii warra Roomaa
Haleellaa Naayiroobii: Namoonni haleellaa raawwatameen shakkaman to'ataman
Haleellaa Masjiida NZ'tti raawwateen walqabatee Feesbuukiin tamsaasa kallattii irratti daangaa tolchuuf
1 Ebla 2019
Haleellaa masijiidaa Masirii: Sinaa'itti yoo xinnaate namoonni 300 ajjeefaman
KALLATTIIN Keeniyaa: Haleellaa shororkeessitootaa Naayiroobiitti
Haleellaa masjiidota Niw Ziilaand: Amantoonni Islaamaa addunyaa gocha kana balaaleffatan
Haleellaa Meeriilaand: Waajira gaazexaa Ameerikaa irraa namootni shan du'an
Waraanni Itoophiyaa Aduwaafi Maayitsabriitti haleellaa xiyyaaraa gaggeesse
Warshaan qalma harree Asallaa dhuguma deebi'ee hojii jalqabee?
12 Onkololeessa 2021
'Faya Dayi'- fiilmii jiruufi jireenya Oromoo Harargee addunyaatti beeksise
9 Onkololeessa 2021
Mootiin qoricha sammuu adoochuu baayyee barbaadamaa ture qabame
Pirezidant Erdogaan ambaasaaddara US fi kan biyyoota biroo sagal ari'uuf
Itoophiyaan guyyaa sadaffaaf Maqaleetti haleellaa qilleensaa raawwatte
Lammiilee Naayijeeriyaa Israa’el irraa beekamtii sanyii Yihuudii barbaadan
Haleellaan qilleensarraa Maqalee 'meeshaalee qunnamtii TPLF barbadeessuufi' jedhe mootummaan